pyuland: February 2008
ဥရောပ ရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ ရဲ့ အလှည့်ကျ ညီလာခံ (နော်ဝေး)
Posted by ပျူတို့မြေ at 5:16 PM0comments Links to this post
ဥရောပ ရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ ရဲ့ အလှည့်ကျ ညီလာခံ (ဒိန်းမတ်)
Posted by ပျူတို့မြေ at 5:13 PM0comments Links to this post
(မိုးမခ သတင်းမီဒီယာ စာမျက်နှာမှ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by ပျူတို့မြေ at 4:19 PM0comments Links to this post
တခါတုန်း က တော မကျ မြို့ မကျ ဒေသ တစ်ခုမှာ နအဖ စစ်သား လူမိုက် တစ်
ယောက်ရယ်၊ နှစ်လုံး ထီ ကော်မရှင် ရောင်းတဲ့ ကြံဖွတ် တစ်ယောက် ရယ်၊ 109…
110.. အရန် မီးသတ် တစ်ယောက်ရယ်၊ သူငယ်တန်းကို သုံးနှစ်ကျလို့ကျောင်းထွက်
ခဲ့တဲ့ ကြက်ခြေနီ တစ်ယောက်ရယ် သူငယ်ချင်း လေးယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
တနေ တော့ ကြက်ခြေနီ သူငယ်ချင်း ဟာ မြွေ ကိုက် ခံ ရပြီး သေ ပါ လေရော။ ဒါနဲ့
ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် လဲ စိတ်မကောင်းခြင်း များစွာနဲ့ကွယ်လွန်သူ
သူငယ်ချင်း အသုဘ ကို လိုက်ပို့ ကျတာပေါ့။ သင်္ချိုင်းကုန်း မှာ အသုဘ ကို အခေါင်း
ပိတ် ချိန်လည်း ရောက်ရော အရန်မီးသတ် က စ ပြောတယ်။ ... သူငယ်ချင်း တို့
...သေသွားတဲ့ ဒို့ သူငယ်ချင်း ..နောက်ဘ၀ မှာ တစ်ခုခု ၀ယ်စားဖို့ ... ငါတို့သုံး
ယောက်.. တစ်ယောက်ကို..ပိုက်ဆံ ငါးရာ စီ.. စုပြီး ထည့်ပေးလိုက်ရင်.. ကောင်း
ကြံဖွတ် လုပ်သူ သူငယ်ချင်း က လဲ...အေး ကောင်းသာဘဲ..မင်းအကြံ။ အဲဒီ အချိန်
မှာ စစ်သား သူငယ်ချင်း က ဘာပြောလဲ ဆိုတော့.....မင်းတို့နှစ်ယောက်....တစ်
ယောက် ငါးရာစီ ငါကို ပေးလေ...ငါစီမှာ ဘဏ်က ချက်စာအုပ် ပါတယ်...1500 လို့
ငါရေး ပေးလိုက်မယ်....လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ နအဖ စစ်သား လုပ်သူက ကျန်
နှစ်ယောက် စီ က ငွေ 500 စီ ယူပြီး သူ့ အိပ်ထဲ ကို ထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော်
1500 တန် ချက်လက်မှတ် ကို ကွယ်လွန်သူ ကြက်ခြေနီ သူငယ်ချင်း ရဲ့ အသုဘ
အခေါင်းထဲ ထည့်ပေး လိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော် သူက ပြောပါတယ်…ငါတို့
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:05 PM 1 comments Links to this post
တိုးတက်လာတဲ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်
မြန်မာပြည်က ဒါရိုက်တာကြီးများ ၀င်ငွေ ရရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့ သဘောထားနဲ့ 
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင့်ရေး ကားတွေ ရိုက်ကူး ရာ မှာ နည်းနည်း လောက်
တော့ သတိ ပြုကြ ပါအုံးဗျာ။ ဒို့ သွေးနဲ့ရင်းတဲ့ ငါတို့ မြေ ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုရန်အောင်
တို့နန်းဆုရတီစိုး တို့နေတဲ့ မြို့က အိမ်မှာ တီဗွီ ကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ပြီး တော်
ဇာတ် ၀င် ခန်း တစ်ခု မှာ လဲ တီအီး 11 ကားတစ်စီး ကို တွေ့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်
မှာ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ခေတ်တွင် တီဗွီတွေ တီအီး 11 ကားတွေ ရှိနေတာ တော့
တော်တော် ကို ထူးဆန်း လှပါတယ်။ ပရိတ်သတ် ကို လဲ အားနာကြ ပါအုံး ဗျာ။
Posted by ပျူတို့မြေ at 11:04 PM0comments Links to this post
Pyu (also Pyuu or Pyus; in Chinese records Pyao) refers toacollection of city-states and their language found in the central and northern regions of modern-day Burma (Myanmar) from about 100 BCE to 840 CE. The history of the Pyu is known from two main historical sources: the remnants of their civilization found in stone inscriptions (some in Pali, but rendered in the Pyu script, oraPyu variant of the Gupta script) and the brief accounts of some Chinese travellers and traders, preserved in the Chinese imperial history.
The people of Pyu are believed to have been an ethnic group distinct from the Bamar (Burmans), although they may have intermarried with Sino-Tibetan migrants who later became part of the Bamar ethnicity.
Chinese historical sources state that the Pyu controlled 18 kingdoms and describe them asahumane and peaceful people, and note the elegance and grace of Pyu life. War was virtually unknown amongst the Pyu, and disputes were often solved through duels by champions or building competitions. They even wore bombax (silk cotton) instead of actual silk so they would not have to kill silkworms. Crime was punished by whippings and jails were unknown, though serious crimes could result in the death penalty. The Pyu were Theravada Buddhism, and all children were educated as novices in the temples from the age of seven until the age of 20.
The Pyu city-states never unified intoaPyu kingdom, but the more powerful cities often dominated and called for tribute from the lesser cities. The most powerful city by far was Sri Ksetra, which archaeological evidence indicates was the largest city that has ever been built in Burma. The exact date of its founding is not known, though likely to be prior toadynastic change in the year 94 that Pyu chronicles speak of. In the 7th century the Pyu shifted their capital northward towards Halingyi in the dry zone, leaving Shri Ksetra asasecondary centre to oversee trade in the south.
Sri Ksetra was apparently abandoned around 656 in favour ofamore northern capital, though the exact site is not known. Some historians believe it was Halingyi, and may be related to the ancient city of Tagaung. Wherever the new capital was located, it was sacked by the kingdom of Nanzhao in the mid-9th century, ending the Pyu's period of dominance.
Posted by ပျူတို့မြေ at 9:32 PM 1 comments Links to this post
ဥရောပ ရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ ရဲ့ အလှည့်ကျ ညီလာခ...